အပိုငျး ၂၄ - BookCubicle
ဓားကိုလကျ၌ကိုငျထားရငျး ခငျြးယနျဟူ၏ သတ်တိတှကေ သူ့ကိုတှနျးအားဖွဈနစေတေယျ။ သူ့ပွိုငျဘကျက သူတျောစငျလကျနကျသှနျးလုပျနိုငျနတေဲ့ သူတျောစငျတဈယောကျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈပါ သူကလညျး အရမျးအားမနညျးလှပါဘူး။
“ခငျြးယနျဟူ မငျးရဲ့သာမနျဓားလေးက ငါ့ကိုယှဉျနိုငျမယျထငျနတောလား။ ဆုတောငျးနလေိုကျ။ အခု သူတျောစငျတဈယောကျရဲ့စှမျးအားကို မငျးသိအောငျငါပွမယျ။”
ရှရေောငျဓားကွီးကိုလကျနှဈဖကျဖွငျ့သယျကာ ခငျြးယနျဟူအား လငျြမွနျစှာ ခုတျပိုငျးလိုကျသညျ။ ဓားကသိပျမလေးလှသညျမို့ အားဖွငျ့လှဲလိုကျနိုငျသညျ။။ ဓားဟာ မကျြတောငျတဈခတျအတှငျးမှာ ခငျြးယနျဟူထံ တိုးဝငျသှားသညျ။
ကဒီယနျ၏သူတျောစငျလကျနကျကိုသာ ခငျြးယနျဟူအာရုံစိုကျနခေဲ့သညျမို့ သူ့ကိုမထိခငျမှာ လငျြမွနျစှာရှောငျလိုကျနိုငျသညျ။ဓားဟာ သူ့ဘေးမှကပျဖွတျသှားပွီး အ၀တျအစားတှကေိုသာထိသှားခဲ့သညျ။
သူတျောစငျဖွဈသှားပွီးတဲ့နောကျမှာ ကဒီယနျကယခငျကထကျ သိသိသာသာခှနျအားတှေ တိုးလာခဲ့တယျ။ ခငျြးယနျဟူ သူ့ကိုယှဉျနိုငျဖို့ရာ မဖွဈနိုငျလဘေူး။ အခုပထမအခကျြမှာတငျ ဘယျလောကျအန်တရာယျမြားမှနျး ခငျြးယနျဟူ သိလိုကျရပွီ။
ကဒီယနျခဏလေးတောငျ တုံ့ဆိုငျးမနဘေဲ နောကျတဈကွိမျသူ့ဓားကို ဝယေ့မျးလိုကျပွနျသညျ။ တိုကျခိုကျမှုက ခငျြးယနျဟူနှငျ့ အတျောနီးကပျလာနပွေီ။ ခငျြးယနျဟူ သူ့ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးကို ခြီစှမျးအငျတှဖွေငျ့ ကာကှယျထားလိုကျသညျ။ ကဒီယနျကလညျး သူ့ရှရေောငျဓားဖွငျ့ ခငျြးယနျဟူကိုခုတျပိုငျးပွနျသညျ။
ထိုရှရေောငျဓားဟာ မညျမြှသနျမာသညျကိုတှမွေ့ငျပွီးတဲ့ ခငျြးယနျဟူမှာ ကူကယျရာမဲ့စှာဖွငျ့ သူ့ရဲ့ဓားဖွငျ့သာ ခုခံလိုကျရတော့သညျ။ ခငျြးယနျဟူ မြှျောလငျ့ထားသညျထကျ သူတျောစငျလကျနကျကမြားစှာမွနျနသေညျ။ သူနညျးနညျးလေးသာနှေးသှားခဲ့မယျဆိုလြှငျ သူ့ခေါငျးပွတျသှားလောကျပပွေီ။ နောကျဓားခကျြအဝကေို့ သူမခုခံနိုငျတော့ဘဲ အမွနျရှောငျပွေးလိုကျရသညျ။
ခငျြးယနျဟူ ခုနျရှောငျပွီးတဲ့နောကျ ရှရေောငျဓားဟာ ယခငျသူရပျခဲ့သညျ့နရောပျေါ ခုတျပိုငျးမိသှား၏။ ပွငျးထနျသညျ့စှမျးအားးတှကွေောငျ့ ထိုနရောတှငျ နကျရှိုငျးသညျ့အကျကှဲရာကွီး ဖွဈသှားခဲ့ကာ အရပျလေးမကျြနှာသို့ပါ အနညျးငယျအကျသှားစသေညျ။
ကဒီယနျသူ့ဓားကို အရှိနျထိနျးလိုကျခြိနျတှငျ ခငျြးယနျဟူ သူ့ဓားဖွငျ့ ကဒီယနျကိုလှဲခလြိုကျသညျ။
ကဒီယနျနှာခေါငျးရှုံ့ကာ အထငျးသေးစှာဖွငျ့ လကျတှဝေယေ့မျးလိုကျသညျ။ သူတျောစငျလကျနကျမှ အလငျးရောငျတှဖွောထှကျလာကာ ခငျြးယနျဟူ၏ဓားနှငျ့ ရငျဆိုငျလိုကျသညျ။
ဓားနှဈခြောငျးထိတှမေိ့၇ာမှ ခငျြးယနျဟူ၏ဓားမှာ အကျကှဲသံအကယျြကွီးထှကျလာကာ လကျထဲမှလှတျထှကျသှားရသညျမှာ သူမခုခံနိုငျတော့သဖွငျ့သာ။ ခငျြးယနျဟူ၏ပါးစပျမှ သှေးတှထှေကျလာတာကိုကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ဓားမှဆိုးကြိုးကအတျောမြားမှနျးသိနိုငျသညျ။
ခကျြခငျြးပဲ ကဒီယနျ ခငျြးယနျဟူ့ရငျဘတျကို အားဖွငျ့ကနျကာ တဖနျတကျနငျးလိုကျပွနျသညျ။ သူ့ခှနျအားတှဟော သနျမာတဲ့ခငျြးယနျဟူလိုလူကိုတောငျ လှငျ့ထှကျကာ စငျပျေါသို့ပွနျမကမြှီ လထေဲ၌အတနျကွာနလေိုကျရစသေညျ။
ခငျြးယနျဟူအနျလိုကျရပွီး သူ့မကျြနှာကတော့ အံ့သွသငျ့ကာ ဖွူဖြော့နလေတေယျ။
ဂငျြခနျြအျောဟဈလိုကျသညျ ။သူ့အမူအယာကလညျးပွောငျးလဲလို့နပွေီ။ ခငျြးယနျဟူပွုတျကလြာမညျ့နရောကို ဂငျြခနျြအပွေးသှားရနျ လထေဲတှငျခုနျလိုကျသညျ။ ခငျြးယနျဟူမွပွေငျပျေါပွုတျမကခြငျ ဂငျြခနျြလှမျးဖမျးပှလေို့ကျနိုငျသညျ။
မွပေျေါရောကျတော့ ခငျြးယနျဟူ သှေးအနျလိုကျရပွီး ပွငျးပွငျးထနျထနျ ခြောငျးဆိုးတော့သညျ။ သူတျောစငျတဈယောကျရဲ့စှမျးအားကို ခငျြးယနျဟူလို သူတျောစငျအထှတျအထိပျအဆငျ့ကတောငျမှ မယှဉျနိုငျခဲ့ဘူး။ သူအခု အတှငျးဒဏျရာတှတေျောတျောရထားပွီ။
“အကိုကွီး။ ဒဏျရာတှကေ အတျောပွငျးထနျလား”
ဂငျြခနျြ ခငျြးယနျဟူကို သူ့ကိုယျသူဒောသဖွဈဖွဈနှငျ့စိုးရိမျစှာမေးလိုကျသညျ။
စငျမွငျ့ပျေါမှာ ဝံ့ကွှားစှာရပျနသေညျ့ကဒီယနျအား ခငျြးယနျဟူမုနျးတီးစှာကွညျ့ရငျး ခေါငျးခါပွလိုကျသညျ။
“ငါအဆငျပွပေါတယျ။ ဒီကောငျ သူတျောစငျဖွဈနပွေီမှနျး ငါမထငျထားလိုကျမိဘူး။ အခုအတိုငျးဆို မငျးအကိုကွီးက ဒီကောငျနဲ့ဆကျမပွိုငျနိုငျတော့ဘူး။ “
“ကြှနျတျောတောငျးပနျပါတယျ အကိုကွီး။ ကြှနျတျောကွောငျ့ ဒီလိုဖွဈရတာပါ”
မြားပွားလှတဲ့ဒဏျရာတှကွေောငျ့ ဖွူဖြော့နတေဲ့ ခငျြးယနျဟူကိုကွညျ့ပွိး ဂငျြခနျြအတျောဝမျးနညျးပွီးခံစားသှားရတယျ။
ဂငျြခနျြ့စကားကိုကွားတော့ ခငျြးယနျဟူ မကျြမှောငျကြုံ့ကာ ဒေါသထှကျစှာပွောသညျ။
“ညီငယျလေး။ မငျးဘာစကားပွောလိုကျတာလဲ။ ငါ့ကိုမငျးအကိုမှနျးရော သတိ၇သေးရဲ့လား”
သူ့မကျြနှာမှာ စိတျပကျြမှုတှေ၊အားမလိုအားမရဖွဈမှုတှနှေငျ့ သကျပွငျးခရြငျးပွောလာသညျ။
“ဒါပမေယျ့ မငျးအကိုကွီးက အသုံးမကပြါဘူး။ အခုအခြိနျထိ ငါသူတျောစငျအဆငျ့ကို မေ၇ာကျသေးဘူး။ ဒါကွောငျ့မို့ ကဒီယနျကမကျြလုံးထဲတောငျ မထညျ့ခဲ့တာပဲ။’
ခငျြးယနျဟူရဲ့စကားတှဟော ဂငျြခနျြ့ကိုအတျောခံစားသှားရစသေညျ။ ကဒီယနျကိုတဈခကျြလှညျ့ကွညျ့လိုကျတဲ့အခိုကျမှာ သူ့မကျြလုံးထဲ အေးစကျမှုတှစေက်ကနျ့ပိုငျးလောကျ ဖွတျသနျးသှားသညျ။ ခှဲခွားပွလို့မ၇နိုငျတဲ့ အထငျသေးမှုတှဟော သူ့အကွညျ့ထဲပါနခေဲ့တယျ။ သို့ပမေယျ့ သူခကျြခငျြခံစားခကျြမဲ့စှာပွောလိုကျတယျ။
“အကိုကွီး ခဏလောကျနားနပေါဦး။ ဒီညီလေးက လကျတုံ့ပွနျပေးမယျ။ “
ထိုသို့ပွောပွီးသညျနှငျ့ ဂငျြခနျြ ပွိုငျပှဲစငျမွငျ့ကိုဦးတညျလိုကျသညျ။
ခငျြးယနျဟူ့အမူအယာခကျြခငျြးပွောငျးသှားကာ ခေါငျးတှငျတှငျခါရငျး ဂငျြခနျြ့ကိုလှမျးဆှဲသညျ။
“လုံးဝ မလုပျရဘူး။ ညီငယျလေး မငျးကသူ့ပွိုငျဘကျမဟုတျဘူးကှ”
ဂငျြခနျြ ခငျြးယနျဟူအား တောငျးပနျသလိုပွုံးပွလိုကျပွီးပွောလိုကျတယျ။
“အကိုကွီး။ ကြှနျတျော့ကို ယုံပါ”
သူ့မကျြနှာဟာ အေးစကျနကော ခငျြးယနျဟူရဲ့လကျတှကေိုဖယျလိုကျပွီး စငျမွငျ့ပျေါတကျလိုကျသညျ။
“ဘုရားသခငျ။ ဒီကောငျ ဘာလုပျမလို့လဲ”
“သူ ကဒီယနျနဲ့ပွိုငျမလို့တဲ့လား။ ဘု၇ားရေ…. ဒီကောငျရူးသှားပွီလား”
“သူက အခုမှ သူတျောစငျအဆငျ့၈ပဲရှိသေးတာလေ။ သူတျောစငျတဈယောကျကို ယှဉျဖို့ဆိုတာ ဘယျလိုဖွဈနိုငျမှာလဲ”
ဂငျြခနျြ စငျမွငျ့ပျေါခွခေလြိုကျသညျနှငျ့ ပရိတျသတျထဲကလူတှဟော ကဒီယနျကမငျး၇ဲ့ပွိုငျဘကျ မဟုတျဘူးလို့ အျောဟဈသတိပေးခငျြစိတျတှပေေါကျလာကွတယျ။
“… တကယျကိုအသုံးမကတြဲ့ ဦးနှောကျပဲ။ သူတျောစငျတဈယောကျကို သူတျောစငျအဆငျ့၁၀ကလူတောငျ မနိုငျဘူးဆိုတာ မငျးမတှခေဲ့ဘူးလား။ ဒါတောငျ ဘယျလိုစိတျနဲ့တကျလာရဲသေးတာလဲ”
စာကွညျ့တိုကျမှာ ဂငျြခနျြ့ဘေးထိုငျခဲ့တဲ့ ကောငျမလေးဟာ ဂငျြခနျြစငျပျေါတကျသှားသညျကို စိုးရိမျစှာကွညျ့နလေတေယျ။
ဂငျြခနျြစငျပျေါရောကျသညျအထိ ကဒီယနျကမငျသသေနေဲ့ပဲကွညျ့နလေတေယျ။ ပွီးမှ ခပျညဈညဈရယျကာ ဆှလတေယျ။
“ဘာဖွဈတာလဲ။ ခငျြးယနျ ရှငျးတနျ မငျးငါ့ကိုနိုငျမယျထငျတယျပေါ့”
ကဒီယနျ ဘယျတုနျးကမှ ဂငျြခနျြကိုပွိုငျဘကျတဈယောကျလို့ မထငျခဲ့ဖူးဘူး။ သူကအခု အားကွီးတဲ့ သူတျောစငျတဈယောကျဖွဈနတေော့ ပိုဆိုးသညျ။
ဂငျြခနျြ အေးစကျစကျသာ ပွနျဖွတေယျ။
ခဏကွကျသသေပွေီးနောကျ ကဒီယနျယုတျမာသညျ့အတှေးဖွငျ့ ရယျလိုကျသညျ။
အခုက ဂငျြခနျြ့ကိုရကျရကျစကျစကျ ပွနျအနိုငျယူရမယျ့အခြိနျပဲ။ လူသဈပွိုငျပှဲနကေ့ ဒီကောငျက သူ့ညီမကို ဆိုးဆိုးရှားရှားအရှကျခှဲခဲ့တယျ။ အခု သူ့အလှညျ့ပဲ။
ကဒီလြှံရော ကဒီယနျရောအတှကျ ကဒီကှငျက အရမျးခဈြရတဲ့ညီမလေးပဲ။ ကဒီကှငျကွောငျ့ပဲ သူတို့တှဂေငျြခနျြကို ကွညျ့မရဖွဈခဲ့ရတယျ။
ဂငျြခနျြ တဈလှမျးခငျြးတကျသှားကာ ခငျြးယနျဟူ့ဓားကို ကောကျလိုကျတယျ။ သူ့လကျထဲကဓားအလေးခြိနျကွောငျ့ ဂငျြခနျြမကျြမှောငျကြုံ့လိုကျသညျ။ ဓားတဈခြောငျးက ပေါငျ၁၀၀ထကျပိုမလေးသငျ့ဘူး။ အခုဒီဓားက ပေါငျ၁၀၀မပွညျ့ပမေယျ့ ထိုနီးပါးရှိ တယျ။သူတျောစငျအဆငျ့၈မဟုတျရငျတောငျမှ ဒီဓားကိုအသုံးပွုဖို့သိပျမလှယျဘူး။
သူ့အရငျဘ၀မှာဆို ဂငျြခနျြဓားကိုကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ သုံးနိုငျတယျ။ အထူးသဖွငျ့ …. ဘလိတျဓားပေါ့ ။ ဒီလိုဓားမြိုးကိုတော့ သူနာမညျကွီးဖို့အတှကျ ဓားရေးပွဖို့ကိုသာ သုံးဖွဈလိမျ့မယျ။ သို့ပမေယျ့ ဓားတဈခြောငျးကို လကျနှဈဖကျနဲ့ကိုငျပွီး တိုကျခိုကျဖို့ကတော့ မဟုတျသေးဘူး။ အရမျးလေးလှနျးတဲ့အတှကျ သူ့ခှနျအားတှအေတျောကုနျလိမျ့မယျ။ ရှကျဖို့ကောငျးတာက အနားမှာ အခွားဓားလညျးမရှိတော့ဘူး။
ခဏလောကျတှဝေနေပွေီးတဲ့နောကျ ဂငျြခနျြ ဒီဓားကွီးကိုပဈခလြိုကျပွီး လကျဗလာနဲ့တိုကျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။ အနညျးဆုံးတော့ သူ့မှာ လငျြမွနျမှုတှေ၊ခှနျအားတှရှေိပါသေးတယျ။
စငျမွငျ့အလယျကိုလြှောကျသှားလိုကျကာ ဂငျြခနျြ ကဒီယနျကို မငျသသေဖွေငျ့ကွညျ့ကာ သူ့လကျသီးတှကေိုဆုပျရငျး အသငျ့အနအေထားပွငျထားလိုကျသညျ။
“မငျးအရငျစ။ ငါမငျးကို လကျဗလာနဲ့ ခုခံမယျ”
ကဒီယနျ မကျြခုံးတှကြေုံ့လိုကျသညျ။ ဂငျြခနျြ သူ့ကိုအထငျမကွီးမှနျး သိပျသိသာနတေယျ။ လကျဗလာနဲ့တောငျ တိုကျရဲသညျတဲ့။ သူတျောစငျအဆငျ့၈က လူတဈယောကျက လကျနကျသှနျးလုပျနိုငျနပွေီဖွဈတဲ့ သူတျောစငျတဈယောကျကို လကျဗလာနဲ့တိုကျတယျဆိုတာ သူတျောစငျတှကေို ရှုံ့ခလြိုကျသလိုပဲ။
ဂငျြခနျြကို အထငျသေးစှာကွညျ့ရငျး ပွောလိုကျသညျ။
“ခငျြးယနျ ရှငျးတနျ…. မငျးအတျော မောကျမာတာပဲ”
“ငါ မငျးကိုအနိုငျကငျြ့တယျလို့ မပွောနဲ့။ လာစမျး….. ငါက လကျနကျမပါလညျး မငျးလောကျတော့အေးဆေးပဲ”
ဒီစကားကွားတော့ ဂငျြခနျြ နတျဆိုးဆနျဆနျပွုံးသညျ။ ဘာစကားတဈခှနျးမှ ပွနျမပွောဘဲ ကဒီယနျ့ဆီအရှိနျ နှငျ့ပွေးသှားလိုကျသညျ။ သူ့လကျသီးတှထေဲမှာ သူတျောစငျအဆငျ့၈စှမျးအားတှကေ ထငျးထှကျနကော လထေဲကိုဖွတျပွီး ကဒီယနျ့ခေါငျးကိုဦးတညျလိုကျသညျ။
ကဒီယနျကတော့ ပငျြးရိစှာသာစောငျ့နလေတေယျ။ သူ့လကျသီးနှငျ့ပွနျလညျခုခံဖို့ပွငျလိုကျခြိနျတှငျ ထိုလကျသီးမှ ရှရေောငျစှမျးအားတှကေို ခံစားလို့ရနလေတေယျ။ သူတျောစငျလကျနကျသှနျးလုပျနိုငျတဲ့ သူတျောစငျတှသော ထိုသို့ပွုလုပျနိုငျတာဖွဈသညျ။
လကျသီးနှဈခုမဆုံမိခငျမှာ ဂငျြခနျြ လကျသီးဆုပျထားရာမှ
အသာအယာပဲ ကဒီယနျ့လကျသီးကို ရှောငျလိုကျလတေယျ။ ထိုကျကြိအတှငျးအားသုံးလိုကျတော့ ကဒီယနျ့ကိုသတိလကျလှတျခဏဖွဈသှားစသေညျ။ ထိုခဏမှာ ဂငျြခနျြလကျမောငျးတှဟော မထငျထားသညျ့နရောမှပွနျဝငျလာကာ ကဒီယနျ့လကျကိုလိမျလိုကျသညျ။ လြှပျတဈပွကျအတှငျးမှာ ကဒီယနျ့လကျမှစှမျးအငျတှေ ပြောကျကှယျသှားကာ ဂငျြခနျြက လကျမောငျးကိုလိမျခြိုးလိုကျလတေယျ။
အရိုးးကြိုးသံအကယျြကွီးက လူတိုငျးကိုထိတျလနျ့စတေယျ။ နာကငျြမှုကပွငျးလှနျးလို့ ကဒီယနျရငျခေါငျးသံဖွငျ့ အျောဟဈလိုကျလတေယျ။ သူ့မကျြနှာဟာလညျး အသကေောငျလို ဖွူဖြော့နခေဲ့ပွီ။
သူ့ညာဘကျလကျကြိုးသှားခဲ့ပွီးတာတောငျ ဂငျြခနျြကမရပျသေးဘူး။ သူ့လကျမောငျးနောကျတဈဖကျကိုဆှဲလိမျကာ ခြိုးလိုကျပွနျတယျ။
ဒီတဈခါမှာတော့ ကဒီယနျအသညျးအသနျအျောဟဈလိုကျရတော့တယျ။ သူ့လကျနှဈဖကျလုံးရဲ့နာကငျြမှုက အတျောဆိုးရှားလှတယျ။ သူငယျငယျတုနျးက ဒဏျရာအနညျးငယျရခဲ့ဖူးတယျ။ အဲ့ဒိအခြိနျက သူအသညျးအသနျငိုကြှေးခဲ့ရတာကို အခုထိမှတျမိဆဲ။ သူ့မကျြနှာဟာ သှေးမရှိတော့သလို ဖွူစုတျနပွေီး နှဖူးမှာဆို ခြှေးတှစေီးကလြို့နလေတေယျ။
အျောသံတှကွေားရလို့ကွညျ့လိုကျကွတဲ့ ပရိတျသတျတှဟော ထငျထားသညျနှငျ့ ပွောငျးပွနျဖွဈနတေဲ့ အခွအေနကွေောငျ့ ရှော့ရသှားကွတယျ။ လူတိုငျးဟာ ဂငျြခနျြ့ကိုထူးထူးဆနျးဆနျးကွညျ့နကွေပွီး မယုံနိုငျဖွဈနကွေတယျ။
“ညီငယျလေးက တကယျအံ့သွဖို့ကောငျးတာပဲ။ ကွညျ့လိုကျရုံနဲ့ကို ကဒီယနျဆိုးဆိုးရှားရှားထိခိုကျသှားတာ သခြောတယျ။ကဒီယနျကသူတျောစငျလကျနကျကို မသုံးဘူးဆိုပမေယျ့ သူကသူတျောစငျပဲလေ။ သူ့ခှနျအားက ငါ့ထကျအမြားကွီးသာတယျ”
ခငျြးယနျဟူ ခပျတိုးတိုးရရှေတျရငျး ဂငျြခနျြ့ကို ငေးကွညျ့နပေါတော့တယျ။
ဓားကိုလက်၌ကိုင်ထားရင်း ချင်းယန်ဟူ၏ သတ္တိတွေက သူ့ကိုတွန်းအားဖြစ်နေစေတယ်။ သူ့ပြိုင်ဘက်က သူတော်စင်လက်နက်သွန်းလုပ်နိုင်နေတဲ့ သူတော်စင်တစ်ယောက်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ သူကလည်း အရမ်းအားမနည်းလှပါဘူး။
“ချင်းယန်ဟူ မင်းရဲ့သာမန်ဓားလေးက ငါ့ကိုယှဉ်နိုင်မယ်ထင်နေတာလား။ ဆုတောင်းနေလိုက်။ အခု သူတော်စင်တစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းအားကို မင်းသိအောင်ငါပြမယ်။”
ရွှေရောင်ဓားကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်သယ်ကာ ချင်းယန်ဟူအား လျင်မြန်စွာ ခုတ်ပိုင်းလိုက်သည်။ ဓားကသိပ်မလေးလှသည်မို့ အားဖြင့်လွှဲလိုက်နိုင်သည်။။ ဓားဟာ မျက်တောင်တစ်ခတ်အတွင်းမှာ ချင်းယန်ဟူထံ တိုးဝင်သွားသည်။
ကဒီယန်၏သူတော်စင်လက်နက်ကိုသာ ချင်းယန်ဟူအာရုံစိုက်နေခဲ့သည်မို့ သူ့ကိုမထိခင်မှာ လျင်မြန်စွာရှောင်လိုက်နိုင်သည်။ဓားဟာ သူ့ဘေးမှကပ်ဖြတ်သွားပြီး အ၀တ်အစားတွေကိုသာထိသွားခဲ့သည်။
သူတော်စင်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ ကဒီယန်ကယခင်ကထက် သိသိသာသာခွန်အားတွေ တိုးလာခဲ့တယ်။ ချင်းယန်ဟူ သူ့ကိုယှဉ်နိုင်ဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်လေဘူး။ အခုပထမအချက်မှာတင် ဘယ်လောက်အန္တရာယ်များမှန်း ချင်းယန်ဟူ သိလိုက်ရပြီ။
ကဒီယန်ခဏလေးတောင် တုံ့ဆိုင်းမနေဘဲ နောက်တစ်ကြိမ်သူ့ဓားကို ဝေ့ယမ်းလိုက်ပြန်သည်။ တိုက်ခိုက်မှုက ချင်းယန်ဟူနှင့် အတော်နီးကပ်လာနေပြီ။ ချင်းယန်ဟူ သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ချီစွမ်းအင်တွေဖြင့် ကာကွယ်ထားလိုက်သည်။ ကဒီယန်ကလည်း သူ့ရွှေရောင်ဓားဖြင့် ချင်းယန်ဟူကိုခုတ်ပိုင်းပြန်သည်။
ထိုရွှေရောင်ဓားဟာ မည်မျှသန်မာသည်ကိုတွေ့မြင်ပြီးတဲ့ ချင်းယန်ဟူမှာ ကူကယ်ရာမဲ့စွာဖြင့် သူ့ရဲ့ဓားဖြင့်သာ ခုခံလိုက်ရတော့သည်။ ချင်းယန်ဟူ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် သူတော်စင်လက်နက်ကများစွာမြန်နေသည်။ သူနည်းနည်းလေးသာနှေးသွားခဲ့မယ်ဆိုလျှင် သူ့ခေါင်းပြတ်သွားလောက်ပေပြီ။ နောက်ဓားချက်အဝေ့ကို သူမခုခံနိုင်တော့ဘဲ အမြန်ရှောင်ပြေးလိုက်ရသည်။
ချင်းယန်ဟူ ခုန်ရှောင်ပြီးတဲ့နောက် ရွှေရောင်ဓားဟာ ယခင်သူရပ်ခဲ့သည့်နေရာပေါ် ခုတ်ပိုင်းမိသွား၏။ ပြင်းထန်သည့်စွမ်းအားးတွေကြောင့် ထိုနေရာတွင် နက်ရှိုင်းသည့်အက်ကွဲရာကြီး ဖြစ်သွားခဲ့ကာ အရပ်လေးမျက်နှာသို့ပါ အနည်းငယ်အက်သွားစေသည်။
ကဒီယန်သူ့ဓားကို အရှိန်ထိန်းလိုက်ချိန်တွင် ချင်းယန်ဟူ သူ့ဓားဖြင့် ကဒီယန်ကိုလွှဲချလိုက်သည်။
ကဒီယန်နှာခေါင်းရှုံ့ကာ အထင်းသေးစွာဖြင့် လက်တွေဝေ့ယမ်းလိုက်သည်။ သူတော်စင်လက်နက်မှ အလင်းရောင်တွေဖြာထွက်လာကာ ချင်းယန်ဟူ၏ဓားနှင့် ရင်ဆိုင်လိုက်သည်။
ဓားနှစ်ချောင်းထိတွေ့မိ၇ာမှ ချင်းယန်ဟူ၏ဓားမှာ အက်ကွဲသံအကျယ်ကြီးထွက်လာကာ လက်ထဲမှလွတ်ထွက်သွားရသည်မှာ သူမခုခံနိုင်တော့သဖြင့်သာ။ ချင်းယန်ဟူ၏ပါးစပ်မှ သွေးတွေထွက်လာတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဓားမှဆိုးကျိုးကအတော်များမှန်းသိနိုင်သည်။
ချက်ချင်းပဲ ကဒီယန် ချင်းယန်ဟူ့ရင်ဘတ်ကို အားဖြင့်ကန်ကာ တဖန်တက်နင်းလိုက်ပြန်သည်။ သူ့ခွန်အားတွေဟာ သန်မာတဲ့ချင်းယန်ဟူလိုလူကိုတောင် လွင့်ထွက်ကာ စင်ပေါ်သို့ပြန်မကျမှီ လေထဲ၌အတန်ကြာနေလိုက်ရစေသည်။
ချင်းယန်ဟူအန်လိုက်ရပြီး သူ့မျက်နှာကတော့ အံ့သြသင့်ကာ ဖြူဖျော့နေလေတယ်။
ဂျင်ချန်အော်ဟစ်လိုက်သည် ။သူ့အမူအယာကလည်းပြောင်းလဲလို့နေပြီ။ ချင်းယန်ဟူပြုတ်ကျလာမည့်နေရာကို ဂျင်ချန်အပြေးသွားရန် လေထဲတွင်ခုန်လိုက်သည်။ ချင်းယန်ဟူမြေပြင်ပေါ်ပြုတ်မကျခင် ဂျင်ချန်လှမ်းဖမ်းပွေ့လိုက်နိုင်သည်။
မြေပေါ်ရောက်တော့ ချင်းယန်ဟူ သွေးအန်လိုက်ရပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ချောင်းဆိုးတော့သည်။ သူတော်စင်တစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းအားကို ချင်းယန်ဟူလို သူတော်စင်အထွတ်အထိပ်အဆင့်ကတောင်မှ မယှဉ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သူအခု အတွင်းဒဏ်ရာတွေတော်တော်ရထားပြီ။
“အကိုကြီး။ ဒဏ်ရာတွေက အတော်ပြင်းထန်လား”
ဂျင်ချန် ချင်းယန်ဟူကို သူ့ကိုယ်သူဒောသဖြစ်ဖြစ်နှင့်စိုးရိမ်စွာမေးလိုက်သည်။
စင်မြင့်ပေါ်မှာ ဝံ့ကြွားစွာရပ်နေသည့်ကဒီယန်အား ချင်းယန်ဟူမုန်းတီးစွာကြည့်ရင်း ခေါင်းခါပြလိုက်သည်။
“ငါအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီကောင် သူတော်စင်ဖြစ်နေပြီမှန်း ငါမထင်ထားလိုက်မိဘူး။ အခုအတိုင်းဆို မင်းအကိုကြီးက ဒီကောင်နဲ့ဆက်မပြိုင်နိုင်တော့ဘူး။ “
“ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ် အကိုကြီး။ ကျွန်တော်ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာပါ”
များပြားလှတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့် ဖြူဖျော့နေတဲ့ ချင်းယန်ဟူကိုကြည့်ပြိး ဂျင်ချန်အတော်ဝမ်းနည်းပြီးခံစားသွားရတယ်။
ဂျင်ချန့်စကားကိုကြားတော့ ချင်းယန်ဟူ မျက်မှောင်ကျုံ့ကာ ဒေါသထွက်စွာပြောသည်။
“ညီငယ်လေး။ မင်းဘာစကားပြောလိုက်တာလဲ။ ငါ့ကိုမင်းအကိုမှန်းရော သတိ၇သေးရဲ့လား”
သူ့မျက်နှာမှာ စိတ်ပျက်မှုတွေ၊အားမလိုအားမရဖြစ်မှုတွေနှင့် သက်ပြင်းချရင်းပြောလာသည်။
“ဒါပေမယ့် မင်းအကိုကြီးက အသုံးမကျပါဘူး။ အခုအချိန်ထိ ငါသူတော်စင်အဆင့်ကို မေ၇ာက်သေးဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ကဒီယန်ကမျက်လုံးထဲတောင် မထည့်ခဲ့တာပဲ။’
ချင်းယန်ဟူရဲ့စကားတွေဟာ ဂျင်ချန့်ကိုအတော်ခံစားသွားရစေသည်။ ကဒီယန်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခိုက်မှာ သူ့မျက်လုံးထဲ အေးစက်မှုတွေစက္ကန့်ပိုင်းလောက် ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ခွဲခြားပြလို့မ၇နိုင်တဲ့ အထင်သေးမှုတွေဟာ သူ့အကြည့်ထဲပါနေခဲ့တယ်။ သို့ပေမယ့် သူချက်ချင်ခံစားချက်မဲ့စွာပြောလိုက်တယ်။
“အကိုကြီး ခဏလောက်နားနေပါဦး။ ဒီညီလေးက လက်တုံ့ပြန်ပေးမယ်။ “
ထိုသို့ပြောပြီးသည်နှင့် ဂျင်ချန် ပြိုင်ပွဲစင်မြင့်ကိုဦးတည်လိုက်သည်။
ချင်းယန်ဟူ့အမူအယာချက်ချင်းပြောင်းသွားကာ ခေါင်းတွင်တွင်ခါရင်း ဂျင်ချန့်ကိုလှမ်းဆွဲသည်။
“လုံးဝ မလုပ်ရဘူး။ ညီငယ်လေး မင်းကသူ့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ဘူးကွ”
ဂျင်ချန် ချင်းယန်ဟူအား တောင်းပန်သလိုပြုံးပြလိုက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။
“အကိုကြီး။ ကျွန်တော့်ကို ယုံပါ”
သူ့မျက်နှာဟာ အေးစက်နေကာ ချင်းယန်ဟူရဲ့လက်တွေကိုဖယ်လိုက်ပြီး စင်မြင့်ပေါ်တက်လိုက်သည်။
“ဘုရားသခင်။ ဒီကောင် ဘာလုပ်မလို့လဲ”
“သူ ကဒီယန်နဲ့ပြိုင်မလို့တဲ့လား။ ဘု၇ားရေ…. ဒီကောင်ရူးသွားပြီလား”
“သူက အခုမှ သူတော်စင်အဆင့်၈ပဲရှိသေးတာလေ။ သူတော်စင်တစ်ယောက်ကို ယှဉ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ”
ဂျင်ချန် စင်မြင့်ပေါ်ခြေချလိုက်သည်နှင့် ပရိတ်သတ်ထဲကလူတွေဟာ ကဒီယန်ကမင်း၇ဲ့ပြိုင်ဘက် မဟုတ်ဘူးလို့ အော်ဟစ်သတိပေးချင်စိတ်တွေပေါက်လာကြတယ်။
“… တကယ်ကိုအသုံးမကျတဲ့ ဦးနှောက်ပဲ။ သူတော်စင်တစ်ယောက်ကို သူတော်စင်အဆင့်၁၀ကလူတောင် မနိုင်ဘူးဆိုတာ မင်းမတွေ့ခဲ့ဘူးလား။ ဒါတောင် ဘယ်လိုစိတ်နဲ့တက်လာရဲသေးတာလဲ”
စာကြည့်တိုက်မှာ ဂျင်ချန့်ဘေးထိုင်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးဟာ ဂျင်ချန်စင်ပေါ်တက်သွားသည်ကို စိုးရိမ်စွာကြည့်နေလေတယ်။
ဂျင်ချန်စင်ပေါ်ရောက်သည်အထိ ကဒီယန်ကမင်သေသေနဲ့ပဲကြည့်နေလေတယ်။ ပြီးမှ ခပ်ညစ်ညစ်ရယ်ကာ ဆွလေတယ်။
“ဘာဖြစ်တာလဲ။ ချင်းယန် ရှင်းတန် မင်းငါ့ကိုနိုင်မယ်ထင်တယ်ပေါ့”
ကဒီယန် ဘယ်တုန်းကမှ ဂျင်ချန်ကိုပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်လို့ မထင်ခဲ့ဖူးဘူး။ သူကအခု အားကြီးတဲ့ သူတော်စင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ ပိုဆိုးသည်။
ဂျင်ချန် အေးစက်စက်သာ ပြန်ဖြေတယ်။
ခဏကြက်သေသေပြီးနောက် ကဒီယန်ယုတ်မာသည့်အတွေးဖြင့် ရယ်လိုက်သည်။
အခုက ဂျင်ချန့်ကိုရက်ရက်စက်စက် ပြန်အနိုင်ယူရမယ့်အချိန်ပဲ။ လူသစ်ပြိုင်ပွဲနေ့က ဒီကောင်က သူ့ညီမကို ဆိုးဆိုးရွားရွားအရှက်ခွဲခဲ့တယ်။ အခု သူ့အလှည့်ပဲ။
ကဒီလျှံရော ကဒီယန်ရောအတွက် ကဒီကွင်က အရမ်းချစ်ရတဲ့ညီမလေးပဲ။ ကဒီကွင်ကြောင့်ပဲ သူတို့တွေဂျင်ချန်ကို ကြည့်မရဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဂျင်ချန် တစ်လှမ်းချင်းတက်သွားကာ ချင်းယန်ဟူ့ဓားကို ကောက်လိုက်တယ်။ သူ့လက်ထဲကဓားအလေးချိန်ကြောင့် ဂျင်ချန်မျက်မှောင်ကျုံ့လိုက်သည်။ ဓားတစ်ချောင်းက ပေါင်၁၀၀ထက်ပိုမလေးသင့်ဘူး။ အခုဒီဓားက ပေါင်၁၀၀မပြည့်ပေမယ့် ထိုနီးပါးရှိ တယ်။သူတော်စင်အဆင့်၈မဟုတ်ရင်တောင်မှ ဒီဓားကိုအသုံးပြုဖို့သိပ်မလွယ်ဘူး။
သူ့အရင်ဘ၀မှာဆို ဂျင်ချန်ဓားကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သုံးနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် …. ဘလိတ်ဓားပေါ့ ။ ဒီလိုဓားမျိုးကိုတော့ သူနာမည်ကြီးဖို့အတွက် ဓားရေးပြဖို့ကိုသာ သုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် ဓားတစ်ချောင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ကတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ အရမ်းလေးလွန်းတဲ့အတွက် သူ့ခွန်အားတွေအတော်ကုန်လိမ့်မယ်။ ရှက်ဖို့ကောင်းတာက အနားမှာ အခြားဓားလည်းမရှိတော့ဘူး။
ခဏလောက်တွေဝေနေပြီးတဲ့နောက် ဂျင်ချန် ဒီဓားကြီးကိုပစ်ချလိုက်ပြီး လက်ဗလာနဲ့တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ သူ့မှာ လျင်မြန်မှုတွေ၊ခွန်အားတွေရှိပါသေးတယ်။
စင်မြင့်အလယ်ကိုလျှောက်သွားလိုက်ကာ ဂျင်ချန် ကဒီယန်ကို မင်သေသေဖြင့်ကြည့်ကာ သူ့လက်သီးတွေကိုဆုပ်ရင်း အသင့်အနေအထားပြင်ထားလိုက်သည်။
“မင်းအရင်စ။ ငါမင်းကို လက်ဗလာနဲ့ ခုခံမယ်”
ကဒီယန် မျက်ခုံးတွေကျုံ့လိုက်သည်။ ဂျင်ချန် သူ့ကိုအထင်မကြီးမှန်း သိပ်သိသာနေတယ်။ လက်ဗလာနဲ့တောင် တိုက်ရဲသည်တဲ့။ သူတော်စင်အဆင့်၈က လူတစ်ယောက်က လက်နက်သွန်းလုပ်နိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ သူတော်စင်တစ်ယောက်ကို လက်ဗလာနဲ့တိုက်တယ်ဆိုတာ သူတော်စင်တွေကို ရှုံ့ချလိုက်သလိုပဲ။
ဂျင်ချန်ကို အထင်သေးစွာကြည့်ရင်း ပြောလိုက်သည်။
“ချင်းယန် ရှင်းတန်…. မင်းအတော် မောက်မာတာပဲ”
“ငါ မင်းကိုအနိုင်ကျင့်တယ်လို့ မပြောနဲ့။ လာစမ်း….. ငါက လက်နက်မပါလည်း မင်းလောက်တော့အေးဆေးပဲ”
ဒီစကားကြားတော့ ဂျင်ချန် နတ်ဆိုးဆန်ဆန်ပြုံးသည်။ ဘာစကားတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောဘဲ ကဒီယန့်ဆီအရှိန် နှင့်ပြေးသွားလိုက်သည်။ သူ့လက်သီးတွေထဲမှာ သူတော်စင်အဆင့်၈စွမ်းအားတွေက ထင်းထွက်နေကာ လေထဲကိုဖြတ်ပြီး ကဒီယန့်ခေါင်းကိုဦးတည်လိုက်သည်။
ကဒီယန်ကတော့ ပျင်းရိစွာသာစောင့်နေလေတယ်။ သူ့လက်သီးနှင့်ပြန်လည်ခုခံဖို့ပြင်လိုက်ချိန်တွင် ထိုလက်သီးမှ ရွှေရောင်စွမ်းအားတွေကို ခံစားလို့ရနေလေတယ်။ သူတော်စင်လက်နက်သွန်းလုပ်နိုင်တဲ့ သူတော်စင်တွေသာ ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်သည်။
လက်သီးနှစ်ခုမဆုံမိခင်မှာ ဂျင်ချန် လက်သီးဆုပ်ထားရာမှ
အသာအယာပဲ ကဒီယန့်လက်သီးကို ရှောင်လိုက်လေတယ်။ ထိုက်ကျိအတွင်းအားသုံးလိုက်တော့ ကဒီယန့်ကိုသတိလက်လွတ်ခဏဖြစ်သွားစေသည်။ ထိုခဏမှာ ဂျင်ချန်လက်မောင်းတွေဟာ မထင်ထားသည့်နေရာမှပြန်ဝင်လာကာ ကဒီယန့်လက်ကိုလိမ်လိုက်သည်။ လျှပ်တစ်ပြက်အတွင်းမှာ ကဒီယန့်လက်မှစွမ်းအင်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားကာ ဂျင်ချန်က လက်မောင်းကိုလိမ်ချိုးလိုက်လေတယ်။
အရိုးးကျိုးသံအကျယ်ကြီးက လူတိုင်းကိုထိတ်လန့်စေတယ်။ နာကျင်မှုကပြင်းလွန်းလို့ ကဒီယန်ရင်ခေါင်းသံဖြင့် အော်ဟစ်လိုက်လေတယ်။ သူ့မျက်နှာဟာလည်း အသေကောင်လို ဖြူဖျော့နေခဲ့ပြီ။
သူ့ညာဘက်လက်ကျိုးသွားခဲ့ပြီးတာတောင် ဂျင်ချန်ကမရပ်သေးဘူး။ သူ့လက်မောင်းနောက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲလိမ်ကာ ချိုးလိုက်ပြန်တယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကဒီယန်အသည်းအသန်အော်ဟစ်လိုက်ရတော့တယ်။ သူ့လက်နှစ်ဖက်လုံးရဲ့နာကျင်မှုက အတော်ဆိုးရွားလှတယ်။ သူငယ်ငယ်တုန်းက ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့ဒိအချိန်က သူအသည်းအသန်ငိုကျွေးခဲ့ရတာကို အခုထိမှတ်မိဆဲ။ သူ့မျက်နှာဟာ သွေးမရှိတော့သလို ဖြူစုတ်နေပြီး နှဖူးမှာဆို ချွေးတွေစီးကျလို့နေလေတယ်။
အော်သံတွေကြားရလို့ကြည့်လိုက်ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဟာ ထင်ထားသည်နှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ရှော့ရသွားကြတယ်။ လူတိုင်းဟာ ဂျင်ချန့်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းကြည့်နေကြပြီး မယုံနိုင်ဖြစ်နေကြတယ်။
“ညီငယ်လေးက တကယ်အံ့သြဖို့ကောင်းတာပဲ။ ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ကို ကဒီယန်ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်သွားတာ သေချာတယ်။ကဒီယန်ကသူတော်စင်လက်နက်ကို မသုံးဘူးဆိုပေမယ့် သူကသူတော်စင်ပဲလေ။ သူ့ခွန်အားက ငါ့ထက်အများကြီးသာတယ်”
ချင်းယန်ဟူ ခပ်တိုးတိုးရေရွတ်ရင်း ဂျင်ချန့်ကို ငေးကြည့်နေပါတော့တယ်။
Pann Khatt Waii 13.12.2019, 12:15 4.9